EDULINK's posts - iDownload Pro
EDULINK's public posts
Novem Htoo, 2019 Winner - The Voice Myanmar, has been studying at EDULINK this term. His teachers say he brought enthusiasm to every class and it has beenapleasure teaching him. EDULINK wishes Novem all the best wherever his English takes him next. These pictures are from his time here and he tellsasmall part of his interesting story in upcoming videos. Watch our channel.
Photos from EDULINK's post
Ma Nကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ ညွှန် ကြားချက် များ အရ Covid 19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ EDULINK တွင် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည် များကို EDULINKမှ Executive ဝန်ထမ်း မနန်းတွန်ခမ်း မှ ရှင်းလင်းပြောကြားထားပါသည်။ EDULINK ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ များ အနေ ဖြင့် English Language class များကို Live Virtual Environment မှ တစ်ဆင့် မိမိ တို့ အိမ် တွင် လေ့လာသင်ယူ ကြရန် တိုက်တွန်း ထားပါ သည်။
One of the executive staff at...
Some Words from EDULINK
EDULINK posted on Apr 03, 2020
Free Online Workshop: Boost your vocabulary!
Apr 02, 2020 at 22:31
အတန်းထဲတွင်သင်ကြားသည့်အတွေ့အကြုံအတိုင်းဖြစ်သည့်(Live Classroom) ကိုသင့်အိမ်
ဖုန်း 09 777513000 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။***
EDULINK posted on Apr 02, 2020
The Live Classroom at EDULINK
We've posted another quiz. Takealook and post your answer in the comments. Like and share please.
We'll post the answer and an explanation on Wednesday.
EDULINK မှ ဒီနေ့ quiz အသစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။
Comment မှာဖြေဆိုပြီးဒီ post...
Mar 28, 2020 at 16:34
***ယခုကာလတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ကြားရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကျောင်းသား/သူများ ပညာသွားရောက်သင်ကြားရန် ဆိုင်းငံ့ထားသင့်ပါသလား?***
- သြစတြေးလျနိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာ သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသူများသည် ယခုကာလတွင် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် တွေ့ကြုံ ခံစားနေရသော COVID-19 ကြောင့် ပညာသင်ကြားခြင်း၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် အခြားသော ကဏ္ဍများတွင် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းများ ရှိနေပါသည်။
EDULINK မှအံ့သြပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သော “How to Writes English Lyric” ခေါင်းစဥ်ဖြင့်Workshop ကိုEDULINK မှဝန်ထမ်းများ၊ EDULINK ကျောင်းသားဖြစ်သောအဆိုတော် *Novem Htoo* နှင့်အခြားသောကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ၏ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သောလှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနစ်မတ်လ၊၂၇ ရက်၊ နေ့တွင်ကျရောက်သော(၇၅)ကြိမ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ကို “EDULINK” မိသားစုမှလှိုက်လှဲစွာဂုဏ်ပြူကြိုဆိုအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနစ်မတ်လ၊၂၇ ရက်၊ နေ့တွင်ကျရောက်သော(၇၅)
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ workshops မ်ား online ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္...